Nanao sonia fifanarahana vaovao i Babylona hanaterana 350k ny fiainam-pitantanana manerantany, ao anatin'izany ny fiainana mikarakara 250k
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nanao sonia fifanarahana vaovao i Babylona hanaterana 350k ny fiainam-pitantanana manerantany, ao anatin'izany ny fiainana mikarakara 250k
Babelonia androany dia nanoritsoritra ny vanim-potoana nitohizany, ary nanambara ny ainy c.135k hafa dia hanana fidirana amin'ny tolotra fikarakarana miorina amin'ny vidiny manerana an'i Etazonia sy UK amin'ny alàlan'ny fanitarana ireo fanjakana amerikana fanampiny, Georgia sy Mississippi, ary fitomboana bebe kokoa manerana an'i California. Midika izany fa amin'ny alàlan'ny fampifangaroana maodelim-pitsaboana mifototra amin'ny sandany, Babylona 360 sy ny asany amin'ny fikarakarana voalohany dia hitantana i c. 350k no miaina manerantany, ao anatin'izany ny 105k NHS GP at Hand lives, tamin'ny fiandohan'ny 2022. Nanamafy ny torolàlana momba ny vola 2021 sy 2022 i Babylona tamin'ny 15 septambra 2021.
"Ity fanitarana ny asantsika ity dia hanampy bebe kokoa an'i Babilôna tanjonay hahatratra ireo vondrom-piarahamonina izay sakana ny fidirana sy ny fahafaha-mividy, mba hahatonga ny fitoviana ara-pahasalamana ho toy ny mahazatra," hoy ny Mpanorina & Tale Jeneralin'ny Babylon, Ali Parsa. "Ny fitomboantsika amin'ny fikarakarana miorina amin'ny sandan'ny vidiny dia mampiseho bebe kokoa ny tombony ara-drafitra ho an'ny maodelim-nomerika voalohany, izay miakatra mialoha ny drafitra, mandritra ny fitandroana fahasalamana avo lenta ihany."
Babela dia hampitombo ny isan'ny Amerikanina nanompo tamin'ny alàlan'ny fandaharam-pitsaboana miompana amin'ny sandan'ny sandan'ny fiainana 63k any Georgia sy Mississippi, toy ny tamin'ny vanim-potoana nifanarahana. Ity dia hanampy bebe kokoa amin'ny fiainana 17k any California amin'ny fiandohan'ny taona 2022. Midika izany fa ireo marary Medicaid sy Medicare ireo dia omena fotoana bebe kokoa amin'ny fidirana amin'ny dokotera sy mpitsabo mpanampy 24/7 voalohany, ny fahaizana mahazo fijery manokana sy fanohanana manokana, ary fikolokoloana farany hatramin'ny farany, miaraka amin'ny tanjona hitarika amin'ny vokatra tsara kokoa ary hampihena ny vidin'ny fotoana.
Ny fanitarana amerikana vao tsy ela izay dia mameno ny fitomboana eran'i Babylona, ​​miaraka amina fiainana 55K nampiana vao haingana tany Angletera tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny Royal Wolverhampton NHS Trust eo an-tampon'ny fiainana 105k amin'ny alàlan'ny NHS GP Practice azy manokana, Babylon GP at Hand. Ny fanitarana ny tontolon'ny Babylon 360 manerantany dia manangana bebe kokoa ny fikambanana ho toy ny mpitarika amin'ny fikarakarana nomerika voalohany, mifototra amin'ny iraka fananganana ny orinasa hanomezana fahasalamana ho an'ny olona rehetra eto an-tany. I Babela dia mamerina manamboatra ny fomba fanaterana ny fitsaboana miaraka amina modely tena azo ovaina izay mikendry ny hitahiry ny fahasalaman'ny olona, ​​miala amin'ny maodely ho an'ny serivisy ankehitriny izay mifantoka amin'ny aretina sy ny krizy.
Ny fotoan-dehibe niainan'ny 350K dia rakotra nanerana an'izao tontolo izao dia tonga amin'ny teboka fidinana ho an'i Babylona, ​​miaraka amin'ny tatitra momba ny karama H1 2021 izay nanambara ny fitomboan'ny vola 472% isan-taona, ary ny fampidirana SPAC $ 4.2B miaraka amin'ny Alkuri Global Acqu acquisition Corp. . Amin'ny maha orinasa am-barotra ampahibemaso azy dia manantena i Babylona fa hipetraka amin'ny toerany izay efa azony ary hanohy ny laoniny amin'ny alàlan'ny asa haingana.